မြန်မာ့ဗိသုကာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပုဂံဒေသရှိ ကန်တော့ပလ္လင်ဘုရား၊ ၁၂ ရာစုတွင် တည်ခဲ့သည်။
အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင် တည်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် များပြားလှသော ဗိသုကာလက်ရာများ ရှိ၏။ ထင်ရှားသော အဆောက်အအုံများတွင် ဗုဒ္ဓစေတီများ၊ ဘုရားများ၊ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အဦများ၊ ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ထားသည်များလည်း ပါဝင်၏။ နိုင်ငံ၏ ရိုးရာဗိသုကာလက်ရာများသည် ဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော်များ ဌာပနာထားသည့် နေရာများ၊ ဘုရားဖူးရန် နေရများ၊ ကိုးကွယ်မှုနှင့် ဆိုင်သည်များ၊ နိုင်ငံခြားသားများနှင့် နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သည်များ စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
၁ သမိုင်းနှင့် လွှမ်းမိုးမှုများ
၁.၁ အစောပိုင်း အိန္ဒိယ၏ လွှမ်းမိုးမှုများ
၂ အထင်ကရ ဗိသုကာလက်ရာများ
၃.၁ သရွတ်နုနှင့် သစ်သားပန်းပု
၄ ဗိသုကာလက်ရာများကို ထိခိုက်မှုများ
အစောပိုင်း အိန္ဒိယ၏ လွှမ်းမိုးမှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘောဘောကြီး စေတီတော် သည် ပျူပုံစံဖြင့် တည်ထားသည်၊ သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းတွင် တည်ရှိသည်။
ပျူခေတ်ကာလတွင် စေတီတော်များ တည်ဆောက်မှုကို အလေးပေးသည်။ စေတီတော်များသည် ဆလင်ဒါပုံစံများ ဖြစ်ကြပြီး တစ်ခါတရံ ထီးတော်များ ပါရှိကြသည်။ မြန်မာ့ဗိသုကာသည် ရှေးခေတ် အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုများ လွှမ်းမိုးလျက် ရှိသည်ကို ပထမဆုံးသော နေထိုင်သူများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။
၉ ရာစုတွင် မြန်မာလူမျိုးတို့သည် ပုဂံ ကို ဗဟိုပြုလျက် မင်းဆက်တစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ပုဂံမင်းဆက်၏ ၁၁ ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်သည့် အနော်ရထာသည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းနှင့် အစွန်အဖျားဒေသများကို ပေါင်းစည်းကာ ပုဂံအင်ပါယာကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ ၁၂ ရာစုအလယ် ပုဂံတွင် စေတီပုထိုးပေါင်း ၁၀၀၀၀ ကျော်ကို တည်ထားခဲ့သည်။
ပုဂံရှိ သဗ္ဗညုဘုရား၊ ၁၂ ရာစုအလယ်တွင် အလောင်းစည်သူမင်း တည်ခဲ့သည်။
ပုဂံရှိ ဘုရားများတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ဓမ္မရံကြီးဘုရား
ဂူပြောက်ကြီးဘုရား (မြင်းကပါ) ရှိ နံရံဆေးရေးပန်းချီ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အတွင်းဝန်များရုံး (ဝန်ကြီးများရုံး) နှင့် သမ္မတအိမ်တော်သည် ကိုလိုနီခေတ်ဗိသုကာလက်ရာများ ဖြစ်သည်။
၁၈၈၀ ခုနှစ်များ ဆုံးခါနီးတွင် မြန်မာသည် ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့သည်။ နယ်ချဲ့များ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ ဗိသုကာတို့လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်သည် ကိုလိုနီတို့၏ မြို့တော် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကိုလိုနီတို့သည် ကြီးမားသည့် အဆောက်အဦတို့ကို မြို့တော်တွင် တည်ဆောက်ကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ စီးပွားရေးအတွက် အချက်အချာဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြစ်တစ်လျှောက်တွင် ကိုလိုနီအဆောက်အဦများစွာ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတိုတွင် ဝန်ကြီးများရုံးသည်လည်း အပါအဝင် ဖြစ်၏။ ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် အတွင်းဝန်များရုံးအဖြစ် ၁၉၀၂ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အဆောက်အဦ ဖြစ်သည်။ အခြားမြို့လယ်တွင် တည်ရှိသည့် မြို့တော်ခန်းမ၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေး (ယခင်က စကော့ဈေး ဟု ခေါ်သည်။)၊ Aviet နှင့် Tigran Sarkie တို့ တည်ဆောက်ခဲ့သည့် Strand ဟိုတယ် အစရှိသည်တို့သည် ကိုလိုနီခေတ်က အဆောက်အဦများပင် ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အဓိကနေရာလည်း ဖြစ်၏။ စေတီတော်သည် ၉၉.၄ မီတာ အမြင့် ရှိ၏။ စေတီတော်သည် ရွှေဆိုင်းရွှေပြားတို့ဖြင့် ခြယ်သကာရံထား၏။ အရံစေတီတော်ကလေးများသည် စေတီတော်ကြီးအား ဝန်းရံထားပြီး စိန်ဖူးတော်များလည်း ပါရှိ၏။ လေးနှစ်မှ ငါးနှစ်ကြာတိုင်း ရွှေများကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်၏။ စေတီတော်ကို ထေရဝါဒဗုဒ္ဓအဖွဲ့မှတည်ဆောက်ထားပြီး ဂေါတမဘုရားရှင်၏ ဆံတော်လည်း ဌာပနာထားသည်။
၁၉၀၃ ခုနှစ်၊ မန္တလေးနန်းတော် အစည်းအဝေးခန်းမ
မန္တလေးနန်းတော်သည် သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ့ဗိသုကာလက်ရာများတွင် အခြေခံကျသည့် တစ်ခုဖြစ်၏။ နန်းတော်သည် အတွင်းပိုင်းနေရာများထက် အပြင်ပိုင်းနေရာများက ပိုမို၍ ကြည့်လို့ကောင်းသည်။ ၁၈၅၀ ခုနှစ်များ နောက်ပိုင်းတိုင်အောင် မဆောက်သေးသော်လည်း နန်းတော်၏ အလယ်ပိုင်းနှင့် နန်းတော်၏ ဂိတ်များသည် ပျူခေတ်အစောပိုင်းကာလများ၏ လက္ခဏာများ ရှိနေသည်။ ၁၁ ရာစုကာလ ပုဂံခေတ် သစ်သားဖြင့် တည်ဆောက်သည့် ဗိသုကာလက်ရာများကို မန္တလေးနန်းတော်တွင် တွေ့နိုင်သည်။
သရွတ်နုပြုလုပ်ခြင်းသည် ပုဂံခေတ်အတွင်း တွေ့ရှိရသည်။ မွန်တို့၏ အမွေအနှစ်များတွက်လည်း သရွတ်နုပြုလုပ်ခြင်းကို ခိုင်ခိုင်မာမာ တွေ့ရသည်။
သစ်သားဖြင့် ဗိသုကာလက်ရာများလုပ်ခြင်းသည် မြန်မာတို့၏ ရိုးရာအနုပညာတစ်ခု ဖြစ်ပြီး နှစ်ရာပေါင်းများစွာကပင် ရှင်သန်ထွန်းကားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အပူပိုင်းဒေသရာသီဥတုနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုများကြောင့် လက်မှုပညာတို့သည် အောက်ပိုင်းဒေသများသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
စေတီပုထိုးများတွင် ရွှေဆိုင်းများ ကပ်လှူခြင်းသည် မြန်မာတို အဓိကအသွင်အပြင်တစ်ခု အနေဖြင့် ရှိ၏။[ကိုးကားချက်လိုသည်] ရွှေများကပ်လှူသည့် ဘုရားကျောင်းကန်များတွင် ဗူးဘုရား၊ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၊ ရွှေစည်းခုံစေတီတော်၊ လောကနန္ဒာဘုရားတို့သည် ထင်ရှားသည့် ဘုရားစေတီများ ဖြစ်ကြသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗိသုကာအမွေအနှစ်များစွာသည် စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံး ခဲ့ရသည်။ စစ်ပွဲ၏ အဆုံးပိုင်းကာတွင် မန္တလေးနန်းတော်သည် မီးလောင်မှုကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းကတည်းက များစွာသော ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အဦတို့သည် အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် ဖြိုဖျက်ခဲ့သည်။
↑ Edwards 197.
↑ Myer. Stupas and Stupa-Shrines, 26။
↑ (2016) "Art", Myanmar. Chicago: World Book Inc.။
↑ (2016) "The Pagan Kingdom", Myanmar. Chicago: World Book, Inc.။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Seekins. A Sacred and Public Space. Meio University, 1။
↑ "The Konbaung Dynasty and the Anglo-Saxon Burmese Wars", Myanmar. World Book, Inc.။
↑ Seekins. "The State and the City: 1988 and the Transformation of Rangoon". Pacific Affairs: 258.
↑ ၈.၀ ၈.၁ Seekins. "A Sacred and Public Place". Meio University: 5.
↑ Edwards. "Grounds for protest". The Institute of Postcolonial Studies: 197.
↑ Seekins. "A Sacred and Public Place". Meio University: 2.
↑ Moore. "The Reconstruction of Mandalay Palace". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London: 349.
↑ Moore. "The Reconstruction of Mandalay Palace". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London: 339.
↑ Moore. "The Reconstruction of Mandalay Palace". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London: 341.
↑ Moore. "The Reconstruction of Mandalay Palace". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London: 335 & 343.
↑ Seekins. "The State and the City". Pacific Affairs: 258.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာ့ဗိသုကာ&oldid=474381" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၆:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။